I-misellellany yamagqwirha, oosiyazi, izicakakazi, ii-vampires, iinqanawa kunye neekiti | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, I fantasy, Inoveli, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
UDisemba sele. Uphelile omnye unyaka. Ke namhlanje chukumisa kancinci gintsa uphononongo lwento ayinikileyo ngaye kwinqanaba loncwadi. Ndikwazisa enye yeyona nto ndiyilindeleyo iindaba ka-2019 kwaye ndinika ingxelo ngee izikhumbuzo. Zonke iintlobo ezahlukeneyo zodidi ezifana nabamnyama, ii-comics kunye neziganeko zangoku kuncwadi nakwimiboniso bhanyabhanya efana naleyo UHarry Potter okanye isaga se Ngokuhlwa. Le yalo nyaka ngokwayo ibikhona Ibali lesicakakazi kwaye yakutshanje malunga Inyaniso malunga necala likaHarry Quebert okanye isaga se Ukufunyanwa kwamagqwirha. Naku sisiya.
1 Kuza kubakho amantombazana amaninzi
2 UMbumbi noCullen banomhla wokuzalwa
3 Amagqwirha kunye nezithunzela
4 UHarry Quebert
5 Umhloli Leo Caldas uza kubuya
6 Ukudlala noJohn Blacksad
Kuza kubakho amantombazana amaninzi
UMargaret Atwood, umbhali odumileyo waseKhanada Ibali lesicakakazi, Ukusukela ngo-1985, wabhengeza nje ukuba uyaphela enye inkqubela. Ukupapashwa kwayo kucwangciselwe NgoSeptemba 2019. Iya kuba nesihloko IiTestamente kwaye iyelenqe lisetelwe kwiminyaka eli-15 emva komdlalo wokugqibela ka-Offred, umlinganiswa ophambili. Ibali elitsha liza kubaliswa kwakhona abalinganiswa abathathu ababhinqileyo.
Iziganeko ezenzeke kwi EGiliyadi, iMelika icingelwa nguAtwood kule wedstopia, ogama uhlengahlengiso njengothotho lukamabonakude lube yimpumelelo elingana okanye engaphezulu kokuhlela. Ikwayintlalontle, ngokuba ngu uphawu lomfazi onzima kakhulu namhlanje.
UMbumbi noCullen banomhla wokuzalwa
Umlingo ogqwesileyo kunye ne-vampire kakhulu ... masithi ulutsha lukwisithembiso sabo. Uthotho lwakhe luneminyaka ngokulandelelana kuncwadi nakwimiboniso bhanyabhanya. Abalandeli bakhe, mhlawumbi bangabi bobutsha ngoku kodwa abalandeli bexesha lonke, abanakuba nethamsanqa ngakumbi.
Iwizard ye UJK Rowlings ithatha sele 20 iminyaka nathi ngeSpanish kunye nohlelo olukhethekileyo lwe UHarry Potter kunye nelitye lesithandi-sobulumko. Ngokwenene zinjalo iintlelo ezine zalo mqulu wokuqala abazinikeleyo kwizindlu ezine Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw kunye Slytherin. Ziyaboniswa ngu ULevi ucinezelwe kabini kwaye iqulethe imathiriyeli ekhethekileyo kwimbali yala maqabane omlingo adumileyo.
Kwaye kwelinye icala U-Edward Cullen kunye noBella Swan, Isibini okhokelayo iinoveli ka UStephenie Meyer, enye into epapashayo yalawo enza ixesha loncwadi lolutsha, ahlangane Iminyaka eli-10 ngobuso babo be-cinema, ezo zikaRobert Pattinson noKristen Stewart.
Ke umvelisi wefranchise kwiscreen esikhulu usungule uhlelo olukhethekileyo kukhunjulwa isikhumbuzo seminyaka elishumi kubandakanya inoveli yentsusa Ngokuhlwa nohlaziyo olutsha lwembali igqityiwe ngumbhali, kunye nentshayelelo kunye nesihloko.
Amagqwirha kunye nezithunzela
Enye i-saga, ngeli xesha lelo lombhali waseMelika u-Deborah Harkness, Sele ukubonile ukukhanya kulungelelwaniso lwethelevishini kulo Novemba uphelileyo. Kukwaneminyaka eli-10 ubudala ukusukela oko uHarkness weza nayo. Ukufunyanwa kwamagqwirha libali le amagqwirha, i-vampires kunye needemon zangoku ujonge i umbhalo-ngqangi Umtsalane kunye nokutyhila imvelaphi yawo ngelixa uzenza ukubuyela emva ngexesha kwaye ndikwenze ukuba uthandane phakathi kwabo.
Uthotho oluchanekileyo, luzenza lubonwe kunye neenkwenkwezi uTeresa Palmer kunye noMateyu Goode. Kusenokwenzeka ukuba kufanelekile ngenxa yezizathu ezivakalayo kuthi zethu ezaziyo kwaye ezihlala kweso sixeko singaqhelekanga kwaye sihle Oxford. Ixesha lokuqala le Izahluko ezi-8 elindele isibini nesithathu sezinye izihloko ezenza trilogy: Isithunzi sobusuku y Incwadi yobomi.
Omnye uHarry. Oku kubeka umdali wayo, iSwitzerland, ngaphezulu UJoel dicker, ebisitya indawo yokupapasha eli bali libekwe kathathu (1975, 1998 no-2008) malunga Ukubulawa kukaNola Kellergan, intombazana eneminyaka elishumi elinesihlanu.
Ngoku, umlimi ofanayo Ibali lesicakakazi wenze uhlengahlengiso kumabonakude olwalathiswe ngumlawuli ophambili waseFrance UJean-Jacques Annaud (Bhele, Igama le rose). Ifakwe inkwenkwezi ngomnye umdlali weqonga ongaziwayo kwaye nangaphezulu komabonwakude njengoko enjalo UPatrick Dempsey. Bobabini bakwangabavelisi abaphezulu. Kwaye umbono wam wokuqala wento endiyinxibileyo kukuba yi ulungelelwaniso oluthembekileyo kuqobo lwoncwadi.
Umhloli Leo Caldas uza kubuya
Umbhali weVigo IDomingo Villar, emva kokulinda abafundi bayo ixesha elide, ipapasha Matshi 6 isavenge sakhe sesithathu kuthotho lweenkwenkwezi apho umhloli uLeo Caldas. Inqanawa yokugqibela (isihloko sayo sangaphambili yayiliMnqamlezo waMatye) esiza emva kweminyaka esithoba elineshumi elinambini ngokulandelelana ukusuka Ulwandle lwarhaxwa (kabani ukulungelelaniswa kwefilimu yenziwe ngo-2015) kwaye Amehlo amanzi.
Inqanawa yeVigo, ukuba ndibandwendwele kwaye bendisentliziyweni yam ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini, iyakuphinda ibe yindawo yecala elitsha lomhloli ozolileyo ovela kulo mhlaba. Ngeli xesha atyelelwa ngu Indoda ixhalabile ngokungabikho kwentombi yayo, ongakhange eze kwisidlo sasemini ngempelaveki okanye aye kwiklasi yakhe eVigo School of Arts and Crafts ngoMvulo.
Ukudlala noJohn Blacksad
Ikati elimnyama elinzima kunene kwikomikhi kuthatha ukutsiba kwifomathi kwaye ishiya amaphepha ayo egutyungelwe kwikhadibhodi nakwimibala ye-sepia ukungena kwi-console nokuhamba. Oko sasilela ... Ukuphatha uJohn Blacksad kwisitshixo esingundoqo. bucala ngasekhohlo I-anthropomorphic feline, umcuphi wabucala EMelika yama-50s, akanikwanga kwaphela ukuba aphathwe ngaphandle kwabazali bakhe baseSpain, UJuanjo Guarnido kunye UJuan Diaz-Canales. Kodwa wayeyicela. Ukuze ube lolona luthotho lwee-comic eziphambili kunye nolona luphumeleleyo kule minyaka idlulileyo.
Blacksad: Ngaphantsi kwesikhumba Igama likaNdikhoyo umdlalo wevidiyo ezakuphuma ngo2019 enkosi IiStudios zePendulum. Kwaye kwinto enokubonwa, bubuhle bomzobo obonakala buhle kwaye buthembekile njengeyona yokuqala. Iya kufumaneka I-PlayStation 4, i-Xbox One, iNintendo Shintsha, iPC kunye neMac.
Sisese-50s kwaye siya ENew York. Apho kuqeshwa uJohn Blacksad USonia Dunn. Kuya kufuneka ufumanise ukuba kutheni Utata wakhe, ongumnini weqela lomdlalo wamanqindi othobekileyo, wafunyanwa exhonyiwe Kungekudala ngaphambi kokulwa konyaka. Kwaye ufumane naye imbethi manqindi eyimbalasane, eyanyamalala ngobo busuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » I-misiscellany yamagqwirha, oosiyazi, izicakakazi, i-vampires, iinqanawa kunye neekati